BAHINI CHIKEKO NEPALI YOUN KATHA - FAMILY SEX FANTASY
Written by:- srijanxb
मनमा धेरै किसिमका कुण्ठाले स्थान जमाएको छ र तीमध्ये YAUN कुण्ठाको स्थान बढी छ । चाहना धेरै छन् तर अवसर निकै सीमित । बाह्य शक्तिले अवसरलाई सीमित बनाएको छ । अवरोधै अवरोधले कुण्ठालाई बढावा दियो । तन्नेरी उमेर बित्न लाग्दा पनि स्त्रीसँग YAUN सुख मिलेन Nepali Youn Katha । चाहेर मात्र पूरा हुने रहेनछ । कुण्ठा उचाइमै पुगिसकेकाले समान उमेरका साथीहरूसँग खुलेर कुरा हुन्छ । हाम्रो समूहका अधिकाङ्श कुमारै छन् । कोही-कोही सम्भोगसुखको दाबी गर्छन् । पत्याउनै सकिरहेको छैन । न तिनले देखाएर गरेका छन् न प्रमाण नै ल्याउन सकेका छन् । एउटा साथी सधैँ गर्लफ्रेन्डलाई यसो गरेँ र उसो गरेँ भनेर हैरान गर्छ । हाम्रो मन जलेको जल्यै छ । भेटेपिच्छे डाहा गराउँछ । अति भएपछि एक दिन मैले चुनौतीका साथ भनेँ ‘हेर, तँ धेरै गफ नदे, अहिलेसम्म देखेको समेत छैनस् !’ ऊ उचालिइहाल्यो । भन्यो- ‘बोतलमा भरेर ल्याइदिऊँ ?’ मैले भने- ‘बोतलमा त म पनि भरेर ल्याउन सक्छु ।’ विवाद चल्यो । मैले उचाल्दै भनेँ- ‘गरेकै होस् भने देखाउन सक्छस् ?’ उसले भन्यो- ‘के देखाउनुपर्*यो ?’ ‘मोबाइलमा क्यामरा छँदैछ, खिचेर लेरा’ न !’ चुनौती तेस्र्याएँ । सुरुमा अनकनायो । पछि जङ्गिँदै भन्यो- ‘लेराएँ भने के गर्छौ ?’ दम हाल्नै पर्*यो- ‘एक हप्ताभित्र ल्याइस् भने म हजार दिन्छु, सकिनस् भने तैँले दिनुपर्छ ।’ उसले चुनौतीका साथ तीन दिनभित्र ल्याउँछु भन्यो । समूहका साथीहरूलाई रासलीलाको भिडियो हेर्ने उत्सुकता छ । हामीले नियमित भेटघाट गरिरहे पनि त्यो साथी हरायो । तीन दिनमा टुप्लुक्क देखापर्*यो । फूर्तिफार्ती गरेर आयो । भन्यो- ‘राँडीका छोराहरु लौ आओ, देखाउँछु !’ हामी पनि दङ्ग परेर जम्मा भयौँ । भिडियोमा केटीसँग चुम्बन गरेको र केही संवेदनशील अङ्ग छोएको दृश्य रहेछ । यो सबै बाजी परेरै खिचेको । मलाई कहाँ चित्त बुझ्थ्यो । भनिहालेँ- ‘यति त जो पनि ल्याउन सक्छ । SEX गरेको भन्थिस् त ! भनेको पूरा भएको छैन ।’ उसले भन्यो- ‘चाहियो भने सबै ल्याउन सक्छु !’ मलाई के चाहियो र ? थपिहालेँ- ‘गफ दिन्छस् !’ सनकी स्वभाव देखाइहाल्यो । फूर्तिसाथ भन्यो- ‘त्यो पनि ल्याउँछु, पर्खिराख ।’ अरू साथीहरू मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । मैले उचालेको तिनलाई थाहा छ । मैले भनेँ- ‘तैँले दृश्य ल्याउनचाहिँ सक्दैनस् ।’ जङ्गिँदै भन्यो- ‘तिमीहरू जस्तो नामर्द हो र म ! यस्ता मज्जा धेरै लिइसकेँ ।’ मैले भनेँ- ‘लौ हेरौ न त !’
हप्ता दुई हप्ता बित्दा पनि दृश्य ल्याउन सकेन । जहिले आउँदा पनि सोधखोज गर्छौं । धेरै सोधेकाले लाजै लागेर आउनै छाड्यो । दृश्य ल्याउला भन्ने पत्यार लागेन । गफ दिएको रहेछ । हामीलाई तड्पाउन यसो गरेँ र उसो गरेँ भन्दो हो । गफ हाम्रै सङ्गतबाटै जानेको हो । गफै दिने उमेर । काम कम, गफ धेरै । सपनाको महल बनाउने उमेर । सपनामा रुमल्लिनुको मज्जा पनि छ । जो-कसैले सक्दा पनि सक्दैन । महत्वाकाङ्क्षी बन्न सकिन्छ । यस्तो देह हत्तपत्त कहाँ पाइन्छ ! सधैँजसो भेट्ने जक्सनमा ऊ उचालिँदै आइपुग्यो । युद्ध जितेको सिपाही जस्तै बुरुक्क छ । उसको ताल हेर्दा केही ल्याए जस्तो लाग्यो । धेरै दिन हराएको मान्छे, आज अचानक हषिर्त मुद्रामा देखापर्*यो । प्रश्न कसैले सोधिदेओस् जस्तो गरिरहेछ । एउटा साथीले सोधिहाल्यो- ‘यतिका दिन कता हराएको ?’ अर्कोले भन्यो- ‘खिचेर ल्याइस् त ?’ उसलाई के चाहियो । फूर्तिसाथ भन्यो- ‘गर्छु भनेपछि गर्छु गर्छु ।’ हामी दङ्ग पर्*यौँ । साँच्चै ल्यायो कि क्या हो ! मैले भनेँ- ‘उसो भए देखा त ?’ उसले सबैलाई नजिक आउन भन्यो । मोबाइलमा खिचेको दृश्य स्पष्ट नभए पनि गर्लफ्रेन्डसँगको सम्भोग चिनिने गरी देखियो । दृश्यमा केटी असजिलो मानिरहेकी छे । घरि-घरि मुख छोप्छे । उसले निकै पापड पेलेर दृश्य खिचेको हुनुपर्छ । यो सबै उचालेकै भरमा भएको हो । उसले YAUN सम्बन्ध राखिसकेको पुष्टि गर्न दृश्य पर्याप्त रह्यो ।
आन्तरिक जीवनको गोप्य पाटा भिडियो दृश्य बनी कैद भयो । त्यसले गरेको मोजमज्जा भिडियो दृश्यमा देखेपछि हामी झनै जल्न पुग्यौँ । अर्काको रिस गरेर मात्र भएन । डाहाले केही दिने पनि होइन । जवानी त्यसै खेर जाने भो । समूहका सबै १८ र १९ वर्ष उमेरमा छौँ । तन्नेरी उमेर कुमारमै सीमित रहेर जाने भो । एक दिन केटाहरूलाई भने- ‘यार, अरूहरू मोज गरिरहेछन्, हाम्रो जवानीचाहिँ त्यत्तिकै जाने भो !’ अर्कोले भन्यो- ‘अब के गर्ने त, टाउको फुटाउनुभएन !’ मैले भनेँ- ‘उपाय त लगाउनै पर्*यो ।’ लगाउने उपाय पनि के छ र ! जे छ, हातैको भर छ ! कल्पनाबाहेक केही छैन । किशोर अवस्थाको अन्तिम बिन्दु पार गर्न लाग्दा आत्मग्लानि बढ्न थाल्यो । यो उमेरसम्म न कुनै गर्लफ्रेन्ड न कुनै YAUN सम्बन्ध । यस्तो पनि जीवन हुन्छ ! अरूहरूले मोजमज्जा गरेको हेर्*यो, डाहा गर्*यो । कुण्ठाले उग्र रूप लिइसक्यो । उर्वर उमेरलाई त्यत्तिकै फाल्नुभएन बा ! साथीहरूसँग समेत सल्लाह गरेर केही चाँजोपाँजो मिलाऊँ भनेँ । मिलाउने पो कसरी ? घोत्लिएर सोचेपछि प्रस्ताव राखेँ- ‘केटा हो, वेश्यासँग भए पनि सम्पर्क गर्नुपर्छ । यत्रो किशोर अवस्थामा समेत सम्भोग नगरे जीवनको के अर्थ !’ केटाहरू उत्साही भए । तर वेश्या कहाँ भेटिन्छे ? आजसम्म सुनेको मात्र हो, ठाउँ ठ्याक्कै थाहा छैन । सुनेकै भरमा परेर हिँड्नु पनि भएन । लोकलाजदेखि प्रहरी धरपकडसम्मको हल्ला सुनिएकै छ । डान्सबारमा समेत धरपकड गर्ने पुलिसले YAUN धन्दालाई तारो बनाएको समाचार पढिएकै छ । कि खतरा मोलेरै जानुपर्*यो । केटाहरू खतरा मोल्ने तर किशोर अवस्थालाई त्यत्तिकै खेर जान नदिन राजी भए । समयमा मज्जा नगरे कहिले गर्ने ? योजनाअनुसार पैसाको चाँजोपाँजो मिलाएर बिदाको दिन मध्य सहरमा छिर्*यौँ । चार जनाको समूह ठूलै युद्धमा जान आँटेजसरी हिँडिरहेछौँ । मचाहिँ सडकको दायाँ-बायाँ हिँड्ने युवतीतिर ध्यान दिँदै वेश्या चिन्ने उपाय सिक्दैछु ।
म रविन (उमेर कथा पढेपछी आफैं थाहा हुन्छ) गहुँगोरो वर्णको पाँच फिट पाँच ईन्च उचाई, पचपन्न केजी वजन, बिहान १ घण्टा व्यायाम गर्ने नियमित बानी, फिटनेस पूर्ण गठीलो शरिरको मालिक बलिया पाखुरा भएको पचास-पचपन्न केजीको कुनै पनि वस्तुलाई सजिलै उचाल्न सक्ने क्षमता भएको, सिङ्गापुरे लाहुरेको लागि भिड्न तयार । छ ईन्च लामो सिल्की कालो कपाल ,३० ईन्चको कमर तथा साढे आठ ईन्च तथा तिन ईन्च गोलाईको LADO, छाला पुरै फर्काउन मिल्ने । घरमा बस्दा अधिकांश समय सेण्डो र हाफ पेन्ट लगाउने बानी ।)
मेरो बहिनी हुमा (जुम्लाहा जन्म भएपनि झण्डै डेढ घण्टाले कान्छी, उचाई पाँच फिट तिन ईन्च, २७ ईन्च कमरको साईज पुठ्ठा पछाडी पुट्ट निस्किएको, कमरसम्म आउने कालो र लामो सिल्की कपाल भएकी, बाटुलो अनुहार अलि मोटी भई भने ज्योति मगर जस्तै जस्तै देखिने अनुहार, नाकमा रिङ्ग लगाएकी ठूला ठूला बाटुला आँखा भएपनि उमेर र कमरको हिसाबले स्वाभाविक भन्दा ठूला दुधका पोका भएकी शायदः डि साइजको बुब्स, घरमा बस्दा अधिकांश समय कुर्था सुरुवाल लगाईरहने तर भित्री बस्त्र कहिलेपनि नलगाउने, बाहिर जाँदा प्रायः शर्ट र टाईट पेन्ट लगाउने । पाएसम्म मुखमा चुईङ्गगम चपाईरहने बानी, मिठो र सुरिलो स्वरमा दोहोरी गाउन खप्पीस, गाउँभरिका केटाहरुको तारो ।)
AAMA रुमा (उमेरले रविन भन्दा सोह्र वर्षले जेठी, हुमाभन्दा हल्का मोटी झट्ट हेर्दा हुमाकै डुप्लिकेट, उचाई पाँच फिट तिन ईन्च, अधिकांश समय चोलो र लुङ्गी लगाईरहने, घर जाँदा होस् वा बाहिर जाँदा भित्री बस्त्र नलगाउने, हुमाका जत्रै ठूला ठूला दुधका पोका, झण्डै २८ ईन्चको कमर भएपनि फैलिएका पुठ्ठा टम्म मिलेका दाँत, घरमा आउने पाहुनासँग जिस्कने र छिल्लिने बानी भएकी, यति SEXY कि हरेक दिनजसो ऐनाको अगाडी बसेर आफ्नो शरिरको जायजा लिईरहने, बुब्सलाई नापेजस्तो गरि खेलाउने, साँझ एक्लै भएको समयमा PUTI मा औंला छिराएर SEX को आनन्द लिईरहने स्थानिय स्कूलमा प्राथमिक शिक्षिका, स्कूलमै पनि पुराना शिक्षकहरु उनकै वरपर झुम्मिरहने । साँझ हुमा र म भलिबल खेल्न चउरमा जान्थ्यौं र फर्कदाँ अधिकांश समय AAMA लाई अस्तव्यस्त कपडा मिलाउँदै गरेको भेटिने र AAMA को अनुहारमा हल्का सन्तुष्ट भएको भाव झल्कने गर्थ्यो ।)
BABA कप्तान ओम बहादुर (उमेरले AAMA भन्दा लगभग आठ वर्षले जेठो, उचाई पाँच फिट छ ईन्च, लगभग आठ ईन्चको LADO अनि मोटाई साढे तिन ईन्च, गठीलो शरिरको हङ्गकङ्गको रिटायर्ड लाहुरे, रिटायर्ड भएपछी गाउँमै बिभिन्न प्रकारका फलफुलको खेती गर्नमा व्यस्त, बेलाबेलामा गाउँमै पनि दोहोरीमा खप्पीस, दोहोरी भनेपछी रातभर बस्न तयार हुने, उमेरमा गाउँकै सबैभन्दा बढी आईमाईलाई CHIKNA सफल, दुई तिनवटी आईमाईका बच्चा BABAकै हो भन्ने गाईगुईंसम्म सुनिने, नछुने हुँदा बाहेक हरेक दिन जस्तो फुर्सद मिल्यो कि AAMA को AAMA को लुङ्गी उचालेर चिकिहाल्ने, निकैपटक हुमाले र मैले BABAले AAMA लाई CHIKDA CHIKDAI प्रत्यक्ष पनि देखेको । फलफूलको बगैंचा घरभन्दा अलि पर भएकाले आजकाल प्रायः बिहान नास्ता गरेर निस्केपछी खाना खान आउने र त्यसपछी साढे छ बजेभन्दा अगाडी घर नफर्कने, साँझ प्रायः घरमै बसेर झण्डै एक बोतल कोदोको रक्सी पिउने बानी)
KAKA जम्दार हेम बहादुर (उमेरले BABAभन्दा तिन वर्षले कान्छो, उचाई पाँच फिट आठ ईन्च, गाउँकै सबैभन्दा अग्लो मान्छे, असाध्यै खेलाडीजस्तो देखिने शरिर, अहिले पनि गाँउमा ठुलै बल लगाउने काम पर्*यो भने सबैले सम्झिने, हाम्रो घरसँगै जोडिएको गाउँकै सबैभन्दा राम्रो अनि ठूलो घर भएको, पारम्परिक खेतीमा संलग्न, BABA जस्तै गाउँकी अधिकांश आईमाईलाई सुताईसकेका र कतै कतै हल्लामा BABA र KAKA मिलेर पालैपालो आइमाईहरुलाई चिकेको सम्म कुरा पनि सुनिने, KAKA पनि KAKIलाई जहाँ भेट्यो त्यहीं CHIKNA सुरु गरिहाल्ने, कहिलेकाँही KAKAको घरमा पुग्दा ठाडै “तेरो KAKI र म NANGAI छु एकछिनपछी आइज” भनेर भन्ने, BABA र KAKA दाजुभाई यति धेरै मिल्थे कि साँझ प्रायः सँगै हाम्रै घरमा रक्सी पिउँथे, पैसाको कमी नभएका घरमा कोही आईमाई पैसा सापटी लिन आएभने पनि पैसा त दिउँला बदलामा मेरो काखमा बस्न आउँछेस् कान्छी भन्दै मुख मिठाउने लाज पचेका, KAKAको हाईट जस्तै LADO पनि लामो र मोटो शायदः गाउँकै सबैभन्दा खाईलाग्दो LADO होला, नठन्केको बेलामा पनि पछाडी चाकसम्म पुग्ने अनि आइमाईको अगाडीनै LADO सुमसुम्याई रहने ।)
NOTE:- यो कथा अपूरो छ । सम्झनाको लागी मात्रै पोस्ट गरिएको हो ।
20/12/2018 xfamilyfantasy Comments Off on BUHARI LAI JISKAYERA CHIKE – CHIKEKO NEPALI YOUN KATHA
Hello readers…mero naam keshab ho….Ma chai sinamangal ma basne ho…ma mero ama bau bhai ani mero...
15/10/2018 xfamilyfantasy Comments Off on NEPALI BHAUJU CHIKEKO NEPALI YAUN KATHA
NAYA NEPALI YOUN KATHA म काठमाण्डौको गाउँमा एउटा बृहत परिवारमा जन्मिएको हुँ । मेरो घरमा ३...